'Échale ganas, mijo' / 'यो तपाईको सबै दिनुहोस्, छोरा': PART एक
Samhita Collur मा फ्रेवुअरी 27, 2019 द्वारा लिखित।
जीवन सपनाको बारेमा हो
मैले सँधै आफूलाई विचार गरेको छु सपना देख्ने व्यक्ति - यो शब्द धेरै पहिले अवसरको भूमिमा सफलताको लागि संघर्ष गर्दै कडा परिश्रम गर्ने आप्रवासी युवाहरूको समुदाय पहिचान गर्न प्रयोग गरिएको थियो। म शब्द धेरै गहिरो स्तरमा व्याख्या गर्दछु, र यसले मेरो आफ्नै विचारधाराको विकासलाई असर गरेको छ। म प्रायः सपनाहरूलाई मेरो अतीत र वर्तमानसँग जोड्दछु। मेरो सपनाहरु पनि मेरो भविष्य को लागी दर्शन सेट।
मेरो लागि, शब्द सपना देख्ने व्यक्ति DACA प्राप्तकर्ता भएको मेरो हालको स्थिति पछाडि जान्छ। म राम्रो रातको निद्राको आनन्द लिन्छु। विशेष गरी जब म मेरो आफ्नै व्यक्तिगत lucid "सपना भूमि" मा प्रेरित हुँ। मैले मेरा सपनाहरूबाट पाठ लिएको छु जसले मलाई आकार दिएका छन जुन म आज छु। म प्राय: आफ्नो जीवनको विगतका सम्झनाहरू र अनुभवहरूको खजानामा पुनः सपना देख्छु।
म मेक्सिकोमा मेरो जीवनको सपना देख्दछु। म भेराक्रुज राज्यमा जन्म भएको थिएँ - एक तटीय राज्य जसको मूल निवासी प्राय: "जारोकोस" भनेर चिनिन्छ। मलाई मेरो आमा बुबा र परिवारले हुर्काउनुभयो। म मेरो हजुरबा हजुरआम क्यामिलोको दृश्य देख्छु जसले हामीलाई वरपरका मानिसहरूलाई आदरको अर्थ सिकायो र मेरा आमाबाबुलाई कडा, तर निष्पक्ष अनुशासनात्मक मापदण्डहरू राख्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुभयो। म मेरो हजुरआमा, गुइलर्मिनालाई देख्छु, जसले सँधै माया र मेक्सिकन खाना बनाउँछिन्।
मैले मेरो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने घटनाहरूको कल्पना पनि गरिन। यो सबै एक जना मानिससँगै सुरु भयो, मेरा बुबा, जसले आफ्नो परिवारको हितको लागि र अझ राम्रो जीवनको खोजीको लागि जोखिम लिन तयार हुनुहुन्थ्यो - तथाकथित अमेरिकी सपना। मेरो बुबा सन्‌ १ 1990 1990 ० मा दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा बसाइँ सर्नुभयो। धेरै महिनापछि, मेरी आमा उहाँसँग सीमापार जानुभयो। त्यस समयमा म छ वर्षको थिएँ, र मेरो युवावस्थाको दिमागले मेरा आमाबाबुको प्रस्थानप्रति असन्तुष्टि र गोलमाल महसुस गर्यो। किन तिनीहरूले हामीलाई छोड्ने थिए? यो साधारण अर्थमा थिएन।
एक बर्ष मेरो आमा बाबु बिना बाँचेको बित्यो। मेरो हजुरबा हजुरआमाले हाम्रो ख्याल राख्नुभयो र हाम्रो अवस्थित अवस्थाको राम्रो बनाउन प्रयास गर्नुभयो। स्काइप वा सोशल मिडियामा पहुँच पाउँदा मेरा आमा बुबाको साथ कुराकानी त्यति सहज भएको थियो।
सन्‌ १ 1992 1992 २ मा मेरो दाइ र म दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा हाम्रा बुबाआमासित पुनर्मिलन भयो। यात्रा लामो थियो। मलाई याद छ एक भीडभाडो बसबाट अर्कोमा उफ्रिने। मेरा अभिभावकलाई भेट्न म उत्साहित र नर्भस थिएँ र मलाई मेरो मनपर्ने काकाको साथ यात्रा गर्न सजिलो लाग्यो। हामी गन्तव्यमा पुगेका थियौं जुन मैले पछि सिकेका थिए तिजुआना। काकाले हामीलाई दुई अज्ञात महिलाहरूसँग परिचय गराउनुभयो र उनीहरूको हेरचाहमा हामीलाई छोड्नुभयो। विदाईहरू बोल्दा, मामाले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो कि यी महिलाहरूले हामीलाई हाम्रा बाबुआमामा लानेछन्। के भइरहेको छ मैले बुझ्न सकिनँ, र मैले मेरो जेठो दाइलाई मेरो नजिक समातें। मेरो भाइ पनि त्यस्तै स्थितिमा थिए र हामी एकअर्कामा भएकोमा म खुसी भए।
मेरो भाग्य एक अर्ध ट्रकको पछाडिको केबिनमा मेरो उद्यमबाट सुत्नको लागि मेरो भाग्यशाली थियो - मेरा आमाबुवासँग पुनर्मिलनको सपना देख्दै। तर मैले यो पनि महसुस गरें कि उनीहरूले हामीलाई आफ्नो त्यागको लागि व्याख्या गरिदिए।
उत्तरी मेक्सिकोमा स्वागत छ
क्यालिफोर्नियामा जीवनको केही बानी भइरहेको थियो तर म छिट्टै आत्मसात् गर्न सफल भएँ। हामी ठूलो ल्याटिनो समुदायको साथ छरछिमेकमा बस्यौं। मेरा शिक्षकहरूले स्पेनिश बोल्थे, र मेरा साथीहरू सबै मेक्सिकन थिए। मैले महसुस गरेको अपेक्षा गरेको संस्कृति सदमेको भावना धेरै महसुस गरेन। यद्यपि मैले मेरो परिवारलाई घरै छोडेर गएको छु, मेरा आमाबुवाले यो शर्त बिना शर्त प्रेम प्रदान गर्नुभयो जुन केवल आफ्ना बाबुआमाले मात्र दिन सक्दछ। उनीहरूले हामीलाई अमेरिकामा जन्मेको सानो भाई पनि दिए।
मेरा आमाबुबाले म र मेरा भाइहरूमा धेरै जीवन पाठहरू जारी राख्नुभयो। म मेरो बुबा हरेक रात ढिलो फोहर लुगा र आफ्नो छालामा गाढा टोनको साथ घर आउने देख्दछु। उनले मजदुरको रूपमा निर्माण उद्योगमा काम गरे। हाम्रो गृहकार्य सकियो र हाम्रो काम पूरा भयो भनेर निश्चित गरेर हामी हाम्रा मूल्यमान्यता तथा नैतिकताको पालन गरिरहेका छौं भन्ने कुराको लागि उहाँ सधैं समय समर्पण गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि पूर्ण भएपछि, हामीलाई फुर्सतको समयको साथ पुरस्कृत गरियो। मैले कडा कार्यको नैतिकताको मूल्यमा मेरो बुबाको पाठ बुझ्न थालें। उसले निरन्तर मलाई याद गराउँदछ कि कडा मेहनत गरेर, चाहे यो स्कूलको काम हो वा chores, म भविष्यमा ठूलो परिणामहरू लिने छु।
मेरी आमाले मलाई धैर्यता र अनुकम्पाको मूल्यहरूमा सम्मिलित गर्नुभयो। उनी मेरो स्नेहको राम्रो स्नेह र स्कूलमा सकारात्मक ग्रेडका लागि मायाको साथ मुस्कुराउँछिन्। उनी अनुशासनात्मक कार्यहरूसँग स did्घर्ष गर्छिन्, र उनले प्राय: जसो यी कामहरू मेरो बुवालाई दिइन्थ्यो। मेरी आमा जहिले पनि उद्यमी मानसिकता हुनुहुन्थ्यो। एक अमेरिकी परिवारको केयर टेकरको रूपमा काम गर्नु बाहेक, उनले छेउमा सौंदर्य प्रसाधन र गहना बेचिन्। उनको सूची खरीद गर्न, उनी प्राय: भाग लिईन् टन्डस उनको पैसा बचाउन मद्दत गर्न।
मेरो बुबाले धेरै दिन काम गर्नुभयो र मेरी आमाले लामो रात काम गर्नुभयो, त्यसैले म सप्ताहन्तको कदर गर्थें किनभने त्यस्तो समय थियो जब हामी एक साथ परिवारका साथ हुन सक्थ्यौं।
तपाइँ कसरी यो स्पेनिश मा भन्छन्?
अमेरिकामा बसाईएको केही बर्ष सम्म यो थिएन कि मैले संस्कृतिमा आघात महसुस गरे। मेरा अभिभावकहरूले उत्तर मिनेसोटामा सर्ने निर्णय गरे। म त्यसबेला छैठौं कक्षामा थिएँ र मेरा साथीहरूलाई क्यालिफोर्नियामा छोडेर आएकोमा म क्रोधित र निराश भएँ। सुरुमा विस्तारित परिवारको सदस्यको साथ एउटा अपार्टमेन्ट साझेदारी गरे पछि हामी फर्मि Far्टन शहरमा बसोबास ग .्यौं।
द्वारा घेरिएको gringos धेरै नर्भ्रेकिंग अनुभव थियो। मेरो अंग्रेजी अझै सीमित थियो, र मेरो उच्चारण भारी थियो। क्यालिफोर्नियामा, म प्रायः स्प्यानिश बोल्दै थिएँ, र म प्रायः ल्याटिनोहरूको छेउमा बस्छु। मेरा सहपाठीहरूले मलाई लगातार मेरो उच्चारणको सम्झना गराउँथे, र प्राय जसो काकेसियाली शहरमा केही मेक्सिकन बच्चाहरू मध्ये एक भएको कारण, म खिन्न औंठो जस्तो भएँ। जे होस्, म स्पेनिश सिक्न मा उनीहरूको चासो जगाउन सक्षम थिए, राम्रो ... स्पेनिश श्राप शब्दहरू।
धेरै कक्षाका साथीहरूले मलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरे र मेरो उपस्थितिलाई स्वीकारिरहेका थिए, तर अरूले मलाई कमजोर पार्न खोज्नु पर्ने महसुस गरे। मलाई उनीहरूको भित्री घेरामा जत्तिकै महसुस भएन। मैले ठाउँबाट बाहिर महसुस गरें, आत्मविश्वास नभएको, र मेरो पहिलेको जस्तो मन परेन। म धेरै आरक्षित र शान्त भएँ।
यसले केहि समय लिए, तर अन्तमा मैले मिनेसोटालाई मेरो नयाँ घरको रूपमा स्वीकार्न थालें। तर पक्कै पनि, मैले आफूलाई सधैं नयाँ लेन्सबाट हेरेर स्थिर रहन संघर्ष गरिरहें। म मेरो अंश नकारात्मक अनुभवहरूको बाँचिरहेको छु, विशेष गरी जातिवादको वरिपरि। यी क्षणहरूको बखत, म मेरो बुबाको जीवन पाठको लागि आग्रह गर्दछु: कहिल्यै आक्रमणकारी नहुनुहोस् वा झगडा नगर्नुहोस्, तर अरूलाई तपाईंको मूल्य कम गर्न वा तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिको मूल्य घटाउन नदिनुहोस् - र सँधै आफ्नो व्यक्तिगत मूल्यहरूको रक्षा गर्नुहोस्। । मसँग चुनौती भएपछि मेरो मैदानमा उभिन बाहेक अरू विकल्प थिएन।
म केही घनिष्ठ मित्रता को लागी भाग्यशाली थियो। भन्न अनावश्यक…। तिनीहरू सबै ग्रिंगो हुन्। आज सम्म, तिनीहरू अझै पनि मेरो जीवनको हिस्सा हो। तिनीहरू पनि मिनेसोटन जस्तो हुन सक्छन् एक को आशा गर्न सक्छन्। यद्यपि मेरो उच्चारण अझै बाक्लो थियो, तर मैले आफ्नो मौखिक सीप र मेरो उच्चारणसँग अझ बढी आत्मविश्वास महसुस गर्न सिकें। मेरा साथीहरूले अझै पनि मलाई गाह्रो समय दिएका छन् विशेष गरी बी र भि र जे र वाईको भिन्नताहरू, तर मलाई थाहा थियो कि यो सबै राम्रो रमाईलो थियो।
भाग दुई पढ्नुहोस्।